Nwa Ocha kacha mma anyị hụrụ n’okpuru Instagram izu gara aga
Akwụkwọ Nchọpụta Mma kachasị mma nke izu gara aga Anyị nwere nghọta nye anyị nyocha
Icon and Idol: Naomi Campbell Ajụjụ Adut Akech Maka iD
Tizu gara aga ya na Instagram, ụfọdụ ntutu isi na-atụgharị isi ka anyị na-elepụ anya na enyo anyị ogologo oge karịa ka ọ dị mma mana nke ahụ abụghị ihe na-eme mgbe ị hụrụ onye ma ọ bụ ihe ọ bụ ịhụnanya na mbụ anya?
Onye ahia ahia ndi Nigeria Tania Omotayo bụ otu n’ime ọdịdị anyị hụrụ n’anya kpamkpam. Ọ gọziri gram n'izu gara aga site n'ile anya ntakịrị nke sitere n'ike mmụọ nsọ mana ọ bụ ahụ na-agụ ya agụụ mere ka anyị na-eti mkpu ihe mgbaru ọsọ! Na-ekwu maka obere glam anya, Nollywood omee na budding nwanyị DJ Dorcas Shola Fapson, A maara nke ọma dịka Ms DSF, na -elekọta anya mara mma nke dị na bọọdụ. Onye na-eme ihe nkiri ahụ kelere anya mgbe akụkọ bilitere na ngwụsị izu banyere esemokwu dị n'etiti ya na enyi ya Sophia Egbueje.
Onye omere America Nwata Ụmụ debere ihe na apị apị na hippie site na iji swipe nke eyeliner jikọrọ ya na elu ntutu isi ponytail. Ntutu ntutu nke dị egwu na akpụkpọ ahụ ya na-enweghị ntụpọ mere ka ọdịdị ahụ dịkwuo mma. Nwa agbọghọbịa Marsai Martin gara “Njikọ Mba Maka Ọganihu nke Ndị Na-acha Ọcha” Onyinye emere na ngwụcha izu dị ka nri nkịtị. Ọ pụta nke a na-acha odo odo anya onyinyo jikọtara ya na egbugbere ọnụ ịgba ọtọ egbugbere ọnụ ya ntutu isi dina n'azụ. Anya ahụ niile dị ezigbo mma ma dị mma ruo afọ - nke na anyị enweghị ike inye aka n'ịhụnanya!
Anyị ejirila nlezianya mata mma mara mma nke mere ka anyị tinye aka na ihuenyo anyị n'izu a, ma dịka oge niile, enwere anya iji gbaa ụmụ nwanyị ọ bụla ume maka oge ọ bụla.
Lelee anya kachasị mma na izu gara aga…
Buru ebe a tupu 🌹
A post na-akọrọ site Ebonee Davis (@eboneedavis) na Feb 18, 2020 na 2: 22pm PST
Ndụ dị mma mgbe ngbanye okpukpu abụọ gị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu 1 😬 myụrịa ọ myụ ụbọchị m na @dabota_cosmetics. M hụrụ n'anya na nke a mejupụta nke ukwuu! Emere nlele a site na iji ngwa ha.
A post na-akọrọ site TT (@taniaomotayo) na Feb 20, 2020 na 4: 33am PST
Kedu onye bụ onyeisi? Ọ dị mma, enwere m olile anya na azarala ajụjụ ahụ etemeete: @zainabazeez fit Ekike: @julyetpeters 🥰🥰 Fabric: @cottonsandwools 😍 Ngwa: @stylepundit 🙌🏾 Styling: @stylepundit 🥰🥰 Photography: @theimagextyusiast 🥰🥰 Hair styled by @ cletus_bishop 🙌🏾 ❤️❤️❤️❤️❤️ #WhosTheBossFilm #WhostheBossPremiere.
A post na-akọrọ site Jemima Osunde (@jemimaosunde) na Feb 17, 2020 na 9: 46am PST
A post na-akọrọ site Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow) na Feb 19, 2020 na 4: 24pm PST
Anya ikpeazu ❤️❤️❤️
A post na-akọrọ site Enweghị ntụpọ (@flawlessfacesbyjane) na Feb 20, 2020 na 3: 48am PST
"Chilombo" Mach 6th
A post na-akọrọ site Jhené Aiko Efuru Chilombo 🌋 (@jheneaiko) na Feb 21, 2020 na 6: 00pm PST
E mgbu dem 🤣
A post na-akọrọ site Dorcas Shola Fapson #DSF 🎀 (@ms_dsf) na Feb 20, 2020 na 9: 53pm PST
A post na-akọrọ site Yara (يارا) Shahidi (@yarashahidi) na Feb 19, 2020 na 5: 41am PST
mepe akpa gị
A post na-akọrọ site Jackie Aina (@jackieaina) na Feb 17, 2020 na 3: 23pm PST
A post na-akọrọ site Marsai Martin (@marsaimartin) na Feb 23, 2020 na 9: 35am PST
A post na-akọrọ site Temi Otedola (@jtofashion) na Feb 19, 2020 na 9: 47am PST
Ebe E Si Nweta Foto: Instagram | Dị ka e dere - mma kachasị mma ojii
Site na ozi ọma ama ama na mpụta ngwaahịa ndị mba ụwa, ndị Africa na ndị Naijirịa mara, gụkwuo akụkọ akụkọ na-ewu ewu ọhụụ site na ịga. stylerave.com/category/beauty/.
Aduke Shitta mma instagram mara mma n’anya Dorcas Shola Dapson Ebonee Davis Akpụkpọ ahụ na-enweghị ntụpọ Akpụkpọ ahụ na-egbukepụ egbukepụ jackie aina Jemima Osunderu Jhene Aiko Chilombo techaa Marsai Martin Tania Omotayo Temi Otedola Winnie Harlow Nwata Ụmụ
Radị Rave February 24, 2020
Rave News Digest: Harvey Weinstein Achọtara Onye Mara Ikpe, Ezinaụlọ Kazeem 'Kaka' Tiamiyu Kwupụta, Hazard + More
Izu gara aga, Dewy na-enyocha ma na-enwu okirikiri Bụ Niile Ego | Anya kacha mma